Akhriso: 10-ka Sababood Ee Raggu Uga Raagaan Guurka – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Akhriso: 10-ka Sababood Ee Raggu Uga Raagaan Guurka
Akhriso: 10-ka Sababood Ee Raggu Uga Raagaan Guurka
Weli ma ku fikirtay in ay jiraan sababo loo aaneyn karo in ragga qaar ay doobnimo ugu raagaan? daraasad cusub oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in muuqaalka aan soo jiidashada lahayn iyo kalsoonni-darro ay ugu weyn tahay sababaha raggu ay guurka uga raagaan.
Doobnimada waxay faa’iido u leedahay shakhsiyadda qofka oo naftiisa daryeel goonni ah u fidiya, waa sida ay cilmi-baadhisyo hore sheegeen, doobnimadu waxay xoojisaa xidhiidhka bulshada waxayna kordhisaa dhismaha jirka qofka doobka ah oo si weyn isku daryeelaya.
Iyadoo arrimaha aan soo sheegnay ay jiraan ayaa hadana ay u badan tahay in uu qofku Jecayl ku dhaco, sida ay sheegayso jariidada “The Independent” ee gudaha dalka Ingiriiska ka soo baxda.
Sababaha ugu badan ee raggu doobnimda ugu raagaan
Daraasad dhawaan la sameeyay ayaa daahrogtay sababaha ugu badan ee ragga doobnimada ugu raagga.
Iyadoo ay jirto in jawaabtu ay iska caddahay ayaa hadana sababha ugu weyn ay yihiin, inaan dareenkooda laga hoosqaadayn, soo jiidashiisa iyo awoodda ay u leeyihiin in ay dumar la haasaawi karaa ay kaalin muhiim ah ka ciyaarto.
Menelaos Apostolou oo ah Assistant Professor Foculty-ga Humanities, Social Sciences iyo Qaanuunka ee Jaamacadda Nicosia ee Cyprus, ayaa sameeyay daraasad ka hadlaysa sababaha doobnimada ragga ku raagga isagoo su’aal soo dhex dhigay akhtirstayaasha website-ka “Reddit“, Su’aashu waxay u dhacaysan sidan “dhallinyaro maxaad la guursan la’dihiin?”
Su’aashaa waxaa ka soo jawaabtay 20,207 qof, laakiin jawaabaha intooda badani waxay ahaayeen comment laga dhiibtay jawaabo dadka qaar ay ka bixiyeen su’aasha.
Intaa kadib, Cilmi-baadhayaashu waxay si gaar ah u xusheen 13,429 jawaabood oo falcelinta su’aashaa ka dhashay, waxaa laga sii xulay 6,794 oo jawaabood oo ugu dambeyn loo qeybiyay 43 kooxood, qeyb daraasaddan ka mid ah waxaa lagu faafiyay Evolutionary Psychological Science.
Sababata koowaad ee ugu badan ee raggana guurka uga raagaan waxay noqotay muuqaalkooda oo aan soo jiidasho lahayn, waxaa kaalinta labaad soo gashay kalsoonni darro, kaalinta saddexaad iyo afaar waxaa soo galay, ku dhac la’aan iyo inaanuu qofku daneynayn in uu xidhiidh sameeyo, halka sababta shanaad ee guurka ay ragga ugu raagaan ay noqotay haasaawaha(shukaansiga) oo aanay garaneyn.
10 sababood ee ugu badan ee raggu ay guurka uga raagaan
Muuqaalkooda oo aan soo jiidasho lahayn.
Ku-dhac la’aan iyo in aanuu rabitaankiisa sheegan karin.
Inaanuu dan ka lahayn guurka.
Haasaawaha oo aanuu garaneyn.
Goonni u socodnimo iyo qof bulshaawi ah inaanu ahayn.
Inuu xidhiidh hore ka soo fashilmay.
Jaceyl hore oo ka dhicisoobay.
Dumarka doobka ah oo yar.
Sidaas oo kale, waxaa jiray sababo kale oo daraasadda lagu sheegay oo ay ka mid tahay, dhaqaale yari iyo baqdin ay ragga qaar guurka ka qabaan.
Previous articleDaraasad Cusub: Hurdada Badani Khatartan Caafimaad Ayay Leedahay
Next articleMadaxweyne Farmaajo Oo Ka Hadlay Weerarkii Ka Dhacay Masaajidyo Ku Yaalla Newzealand